Isantya seNyanga yoKwazisa: Kutheni le nto iMicimbi yeWebhu yeXabiso
Sibhale kancinci malunga izinto ezichaphazela ukubanakho kwakho ukulayisha ngokukhawuleza kwaye sabelane njani isantya esicothayo ulimaze ishishini lakho. Ndiyamangaliswa ngokunyanisekileyo linani labathengi esidibana nabo abachitha ixesha elininzi kunye namandla ekuthengiseni umxholo kunye neendlela zokukhuthaza- konke ngelixa zilayishwa kumamkeli ongekho mgangathweni kunye nesiza esingakhange silungiselelwe ukulayisha ngokukhawuleza. Siyaqhubeka nokubeka esweni isantya sethu sendawo kwaye senze uhlengahlengiso rhoqo ngenyanga ukunciphisa ixesha elithathwayo ukulayisha.
Izantya ezicothayo ziyabaphazamisa abasebenzisi, ukuthengisa okuchaphazelayo, amava eselfowuni, amava abathengi, inqanaba lokukhangela, kunye nokuguqulwa; Zonke ezi zinto zichaphazela ingeniso yakho. Le infographic evela Abanezakhono, uhamba ngezifundo ezili-12 ezibonisa ukuba ukuphuculwa kwexesha lokulayisha iphepha kuchaphazele njani iziphumo zeshishini:
mPulse mobileInqanaba lokuguqula yi-1.9% xa amaphepha elayishwa kwimizuzwana eyi-2.4, kodwa oko kwehla kuye ku-0.6 nje ukuba begqithe kuma-5.7 amaxesha omthwalo wesibini.
Yahoo! ukwanda kwetrafikhi nge-9% ukuba banciphisa ixesha lokulayisha iphepha ngemizuzwana eyi-0.4.
Amazon banokuphulukana ne- $ 1.6 yezigidigidi kwingeniso yonyaka nyaka ngamnye ukuba ixesha labo lokulayisha iphepha belili-1 yesibini kancinci.
Bing Iingxelo zokuba ukulibaziseka kwemizuzwana emibini kukhokelela kwi-2% yelahleko yengeniso kutyelelo ngalunye, i-4.3% icofe kancinci, kunye ne-3.75% yemibuzo yokukhangela.
Ifanitshala yeSmart Ukuphuculwa kwesantya kuzuze i-20% kuthengiso lwezinto eziphilayo, i-14% inyuka kwiphepha lokujonga, kunye nokunyuka kwenqanaba ngomndilili wezikhundla ezi-2 kwigama ngalinye eliphambili.
Ivenkile kutyhilwe ukuba amaphepha akhawulezayo azisa i-7% ukuya kwi-12% ngaphezulu kokuguqulwa kunamaphepha acothayo.
Microsoft Iingxelo zokuba ulibaziseko lwama-millisecond angama-400 lunokunciphisa umthamo wombuzo nge-0.21%.
Firefox ithi ukunciphisa umndilili wamaxesha omthwalo ngemizuzwana eyi-2.2 kunokunyusa ukhuphelo nge-15.4%.
Uphando Iingxelo zokuba ukwanda kwe-latency nge-100 ukuya kwi-400 millisecond kunciphise ukukhangela kwemihla ngemihla nge-0.2% kunye ne-0.6% ngokwahlukeneyo.
Nantoni na ezenzekelayo ukusika iphepha lokulayisha ngesantya kwisiqingatha kunye namava okonyuka kwe-13% kwintengiso kunye ne-9% yokunyuka kwamaxabiso okuguqula.
Edmunds uchetyiwe imizuzwana esi-7 yexesha lokulayisha kwaye unamava okonyuka kwe-17% kwimibono yephepha kunye ne-3% yokunyuka kwengeniso yentengiso.
EBay kwaye WalMart baphucule amaxesha abo esantya sephepha, kukhokelela kunyuso kuwo onke amaxabiso okuzibandakanya kunye nokuguqula indawo!
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba awudingi ukuncama uyilo ngesantya. Sincedise inkampani eyaziwayo yokuzibandakanya etyale imali kwindawo yokuvuselela kunye nendawo eyothusayo. Iarhente yoyilo abayikhethileyo yakha umxholo omhle kwasekuqaleni, iprojekthi ebiza kakhulu. Xa besungula isiza kumthengisi wokubamba ipremiyamu, amaphepha ayelayishwa kwimizuzwana eyi-13 +, engamkelekanga kubasebenzisi abaninzi. Sifumene itoni yemicimbi- kubandakanya nezikripthi ezingeyomfuneko zokulayisha indawo ngokubanzi, iividiyo ezingakhange zilungiselelwe, imifanekiso engacinezelwanga, uninzi lwezikripthi zangaphandle, kunye neeshiti ezininzi zesitayile. Kwiiveki ezimbalwa, sasinendawo yokulayisha kwindawo kwimizuzwana emi-2 sisebenzisa iqela lezicwangciso.
Iarhente yethu, DK New Media, ichongiwe kwaye yalungiswa itoni yemicimbi- kubandakanya nezikripthi ezingeyomfuneko zokulayisha indawo ngokubanzi, iividiyo ezingalungiswanga, imifanekiso engacinezelwanga, uninzi lwezikripthi zangaphandle, kunye neemakhishithi zesitayile ezininzi. Kwiiveki ezimbalwa, sasinendawo yokulayisha kwindawo kwimizuzwana emi-2 sisebenzisa iqela lezicwangciso. Ukulungisa indawo ayitshintshanga amava oyilo kancinci-kodwa ngokubonakalayo yaphucula amava omsebenzisi.
tags: umthwalomaxcdnmpulseumthwalo wephephaixesha lokulayisha iphephaisantya sephephaixesha lokulayisha iphephaamaphephaisantyaizixhobo zesantyaityhunaIsantya sewebhuisantya sewebhusayithiwebspeed
I-Kaon AR: Iqonga leNene leB2B eliNgezelelweyo